Ndakafongoreswa naSolo achibva andisvirwa nyoro chaiyo - Nhau Dzevakuru
Ndakafongoreswa musango ndikabva ndasvirwa nyoro chaiyo! Ndainge ndava ne one week ndayenda kumusha nestep father yangu yainge yaroora mai vangu. He was a good man kuna mama saka ndainge ndisina problem naye coz for the first time mudhara ashaika mama vainge vava happy.
Mazuva akataurwa kuti tichayenda kumusha ndaitya kuti this new family but patakasvika ikoko it was a different story. Ndainge ndichangopedza kunyora A’level yangu saka I really needed time to get away kaholiday and this was the perfect place. Pamba apa paigara maparents ababa nevazukuru vavo 2 mumwe ayinge atokura zvekuti I think aive zera rangu. There didn’t have mabedrooms akawanda saka isusu vazukuru tairara muone room.
Solo ainge achanopedza form 4 asi he was 18, guess akanonoka kuyenda kuchikoro then Rachel ainge achiri mudiki grade 7 hake. Mumwe musi tayenda kunorara, tangoti tiri hama saka we had our boundaries, hope dzainge dzaramba kubata apa murima, Rachel ainge afa nehope kare saka ndakatanga kuita nyaya na Solo tichikurukura about hupenyu.
Kwaingova kugara kwakasiyana chete asi unotowona kuti munhu ainge ane ma dreams ake akangofanana nesu taigara mutown, hameno zvakabva nekupi ndichibva ndangoti saka uchirivirgin here, Solo akafa nekuseka zvekuti ndakayenda paainge akarara ndikaita kubata muromo. Pandakaita kudaro akavhunduka ko ndaizivei kuti ayinge asina kana kupfeka hembe, ndakangonzwa kudziya nekahu soft ndikaziva kuti iyi imboro chete. Ndakasverera ruoko rwangu kuti ndinyatsonzwa kuti chii, ndakanyarara ndokudzokera paside pangu kuti ndirare but ndaizinyepera nekuti beche rangu rainge rakuvhita vhita.
Mumba makamboita silence iya yekuti wainzwa twupuka twuchiita noise panze, ndipo pakanzi na Solo ko wanyarara indava asi wavhunduka, ndakatanga kuseka ndokubva ndati kuvhunduka chii kamboro kadiki kudaro zvikanzi kadiki kapi huya ubate futi undiudze kuti idiki here paye yanga isati yamira.Takabva taseka tese!
Ndakashaya zvekutaura again coz this change of subject yakabva yaita kuti beche rangu ritote zvekuti ndakaisa chigunwe so ndikanzwa kunyerekedza mukati but I couldn’t tell him, ndichifunga ndega kudaro Solo akabva ati shamwari wandikuvadza now mboro yangu haisikuda kurara, ndichibva ndamuti mazuva ese unoita sei kana yamira zvikanzi ndinobonyora zvangu.
Ndakabva ndamuti ko hauna musikana here zvikanzi aaah sekuru na ambuya vakati ndikangoita musikana ndisati ndapedza chikoro vanodambura mboro yangu. Tichibva taseka kuridza chikuwe! Ndichibva ndamuti saka bonyora futi, zvikanzi iwe ndiwe wazvitanga saka huya upedzise, ndakaita kunge ndafreezer coz didn’t think he would say that, ndakamboramba ndakarara ndichifunga but ndainge ndapedza Form 6 I had always been a good girl now it was time kuti ndiitewo musikanzwa for one night.
Ndakasimuka ndikayenda pana Solo ndokubva ndaisa bhurugwa paside ndichibayirira zimboro rake, ayirevesa rainge raita kusimba and triple in size. Ndakangoti ahhhh but pasina chinguva beche rangu rainge rajaira ndakumuitira chikapa chekuti ndakazoita munhu wekuvhara muromo kuti asamutse mwana. Akazondifongoresa apa ndipo pandinzwa kuti mboro yekuba inonaka. Solo aiyita kundisvira zvekuti apa mboro ichiita kubaya chibereko, ndakakoirwa apa boyz dzekumusha hadzitunde zvekumhanya. Ndainge ndakutonzwa kuneta ndipo pandikanzwa munhu akushinyira apa achisvira chop chop ndinzwe tsaa ndokubva ndadonha pasi huronyo hwese ndokubva hwazara kumagaro angu.
Solo akaramba akabata mboro yake ichingorutsa huronyo apa achigomera nekunakirwa. Tapedza ndakadzokera panzvimbo pangu ndokubva ndamuti I am sure nhasi ndicharara hope dzinonakidza, iye akabva angoti kana neni. Magwana ndakabuda naye akuyenda kumombe ndichingoda kunakirwa neholiday yangu semunhu ainge apedza A’level yake and Solo was friendly but takawirirana kuti hatichasvirane futi in case pangazoite mimba tikazotadza kuita explain magwana.
Previous articleMurume anodawo kuti iwe mukadzi upote uchimbomukwirawo kuda kusvirwa
Next articleNdakasvirwa naPastor ndikabva ndayita born Again